यी हुन् सर्वाधिक कमाई गरेका ऋतिक रोशन अभिनित १० फिल्म
एजेन्सी । एक्सन तथा डान्समा पोख्त बलिउड कलाकार हुन् ऋतिक रोशन । उमेरले ४५ वर्षका पुगेका ऋतिकले सन् २००० को सुपरहिट फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेका हुन् । उनले २५ भन्दा बढि फिल्ममा मुख्य भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले अभिनय गरेका र सर्वाधिक कमाई गरेका १० फिल्मको बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौं । विस्तृतमा
डेढ करोडको लागतमा सिके राउतको जीवनीमा फिल्म बन्ने
फेरि बिकिनी पोजमा साम्राज्ञी !
‘गेम अफ थ्रोन्स’ ले बनायो नयाँ रेकर्ड
एक यस्ती अभिनेत्री जसलाई पहिचान गर्नै कठिन
कलिलै उमेरमा आमा बनेका बलिउड अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी । बलिउडमा केही चर्चित अभिनेत्रीहरु रहेका छन् जो सानो उमेरमा नै आमा बनेका थिए । अभिनेत्री डिम्पल कपाडियाले राजेश खन्नासँग १६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी थिइन् ।
यी हुन् बलिउडका चर्चित भिलेनका छोराहरु
बलिउडका कुनै समय निकै चर्चामा रहेका खलनायकहरु पछिल्लो समय गुमनाम रहेका छन् । नयाँ पुस्ताले उनीहरुलाई केही हदसम्म पछि पारेको पनि बताइन्छ ।
अल्लु अर्जुनले किने सात करोडको भ्यानिटी भ्यान– यस्ता छन् फिचर्स !
काठमाडौं/एजेन्सी । साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुन पछिल्लो समय फिल्म ‘ना पेरु सूर्या, ना इल्लु इन्डिया’ मा देखिएका थिए । यो फिल्ममा अभिनेतन अल्लु अर्जुनले प्रहरी अफिसरको भूमिका निभाएका थिए ।
सम्बन्धविच्छेद पश्चात पुनः घरजम गरेनन् यी बलिउड अभिनेत्रीहरुले
जवानीमै बुढा देखिएका यी बलिउड कलाकारहरु
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता चर्चित अभिनेताहरु रहेका जो आज पनि उत्तिकै फिट एण्ड फाइन रहेका छन् । तर, कुनै समय चर्चामा रहेका केही बलिउड अभिनेता भने जवानीमा नै बुढो देखिएका छन् ।
बलिउडका यी अभिनेत्रीहरु जो आफ्नी आमाजस्तै देखिन्छन् !
एजेन्सी । बलिउडका केही यस्ता अभिनेत्रीहरु छन् जो आफ्नी आमाजस्तै देखिन्छन् ।
कामनपाकी उपमेयर खड्की अस्पताल भर्ना, अवस्था खतरामुक्त
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । छाती गह्रुँगो भएको र स्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो । छातीमा एक्कासि पीडा भएपछि उनलाई नर्भिक अस्पताल लगिएको हो । उनको उपचारमा मुटुरोग विशेषज्ञ जेपी जैसवाल खटिएका छन्। भर्खरै एनजियोग्राफी गरिएको उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उनलाई शनिबार डिस्चार्ज गरिने अस्पतालले जनाएको छ।
सलमान खानले ३०० वटा जिम सेन्टर खोल्दै
एजेन्सी । सलमान खान बलिउडका सबैभन्दा फिट अभिनेतामध्येका एक हुन् । सलमान आफ्नो फिटनेसको लागि एकदमै ख्याल राख्ने गर्छन् । उनले आफ्नो वर्कआउट गरेको तस्विर तथा भिडियो आफ्नो सोशल मिडिया एकाउन्टमा पोष्ट गरिनै रहन्छन् ।
यी हुन् दक्षिण भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेताका रियल दाजुभाईहरु
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय फिल्ममा केही यस्ता अभिनेताहरु रहेका छन् जो रियलमा नै दाजुभाइ हुन् । उनीहरु आफ्नै फ्यानहरु रहेका छन् । चर्चित अभिनेता जुनियर एन्टिआर र